NOOCYADA BEERASHADA IYO BEERISTA NOOCYO KU'SAABSAN "PETROVSKAYA" BEERTA - KU'SAABSAN
Noocyada kala duwan ee xagaaga ee "Petrovskaya" waxaa la soo saaray 1959 iyada oo laga soo gooyay Beelaha. Geedku wuxuu leeyahay dherer celcelis iyo dhumucda taajka, jilifku waa mid bunni ah oo siman.
Laanta ugu muhiimsan waxay ku taallaa jirridda ku dhawaad ​​xagal quman. Laamaha qallafsan, qaabkoodu waa naadir, kor iyo sare.
Noocyada miraha - nooc isku dhafan. Caleemaha waa kuwa dhexdhexaad ah, cufan oo cagaar ah oo qaabeeya qulqul ballaaran oo leh gees jugged leh. Caleen baa ku jirta dheerad ah petiole, saxanka caleen waa miisaan, waxoogaa hoos u xoqaya. Ubax cad waa mid yar, dhexdhexaad ah.
Jalandaha daboolan, midhicirka yaryar, basbaas yar. Qolka abuurka ayaa la xiray, miraha waaweyn, madow. Miraha waa mid cagaaran oo midab leh, dhoobo-casaan leh oo leh maqaarka oo siman, miisaanka qiyaastii 120-135 g.
Peter's pear ku shaqeeya ma laha dhibco subcutaneous of midhaha. Jirka midabka midabkiisu wuxuu leeyahay qaab jilicsan, wax yar oo saliid leh. Dhadhanka midhaha waa miro-macaan, casiir leh.
Midhaha badkoodu wuxuu isbiirsaday badhtamihii bishii Agoosto, iyo noocyada kala duwan ayaa ku habboon sharaxaadda of dhakhso sii kordhaya iyo sare-dhalaya, cadaab qabow u adkaysta.
Ma taqaanaa? Dhirta caleemaha qaarkood waxay ku nool yihiin ilaa 300 sano.
Qodobka la gooyo waa ka fiican tahay in xididka la qaato, haddii aad ku beeri lahayd Sebtembar, ka dib marka caleenta gebi ahaanba dhacdo. Haddii loo baahdo, waxaa suurtagal ah in lagu beero isteroberi guga, ka hor inta aan la gooyin. Dhul guga waxaa lagu dari karaa laamaha gooyaa. Xididdada looma gooyo, laakiin si qunyar ah u toosan.
Noocyo kala duwan oo Peter ah ayaa looga baahan yahay horumarinta wanaagsan ee ay ka helayaan meel wanaagsan oo iftiin leh, oo laga ilaaliyo qoraallada, iyada oo aan lahayn meel u dhow biyaha dhulka, kaas oo lagu kori karo buur. Geedka ayaa si fiican u koraa carrada madow, ciidda ama loamy ciidda leh astaamaha daciifka ah. Haddii goobtu leedahay ciid mid dhoobo ah, isteroberi ayaa lagu beeray god la beerto.
Pear "Petrovskaya", sida noocyada ugu macaan ee isteroberi, waa is-selfless iyo u baahan tahay manka ee pear kale ee pollination ah, waa in la tixgeliyaa marka la qorsheynayo beerta iyo dhigi 2-3 nooc oo isteroberi ah.
Waa muhiim! Biyaha qoyan waa in ka badan laba mitir
Sida loo abuuro geedo pear "Petrovskaya", talaabo talaabo talaabo
Geedo geedo waa in ay leeyihiin nidaam xidideed oo horumar leh oo ka madax banaan dhaawaca jilif iyo laamaha. Wixii dheeraad ah oo lagu guulaysto fruiting pear Peter, waxay markii hore u baahan tahay si loo hubiyo beerto iyo daryeelka wanaagsan. Tixgeli agrotechnica pear Peter ee faahfaahin dheeraad ah.
U diyaargarowga godadka beerta
Ceelasha waa in la qodo 10-14 maalmood ka hor intaan la beeri karaynin. Ceelka cawska ee cayayaanka waa in ay noqdaan 0.6-0.7 m qoto dheer iyo 1 m dhexroorka. Lakabka ugu hooseeya ee ciidda ayaa laga saaraa ceelka, iyo baaldi of peat ama digirta qudhuntay, superphosphate 250 g, 50 g of sulfate iyo ash qoryaha ayaa lagu daraa lakabka sare ee bacriminta. - 200 Qeybta nuska ah ee isku dar ah ee ceelka beerto waxay ka sameeyaan tuulo dusheed oo ah geedo geedo geedo ah lagu rakibay, iyo xididada si siman u faafaya xayawaanka buurtan. Beerto dheeraad ah waa in la dhajiyo khudradda beeridda hurda qaybta soo hartay ee isku dhafka nafaqada leh marxalado qallafsan oo qulqulaya seedling si loogu toosiyo nidaamka xididka. Ciidda agagaarka geedka ayaa si fiican u hirgeliya, qoorta xididku waa inuu ahaado 3-5 cm oo ka sarraysa heerka ciidda. Laga soo bilaabo dhinaca koonfureed ee qoryaha waxay u wadaan jeexjeex ah oo geed ku xardhan sida ku xusan mabda 'siddeed'. Qeybta ku wareegsan oo leh qoryaha dhulka waxay u qoondeeyaan aagga barafka ku dhow, biyo badan iyo mulch ciidda leh balka, jilbaha ama cirbadaha.
Nidaamka beerta "Petrovskaya" waa qiyaastii 4 x 3 mitir, meeshi quudinta hal pear waa inay ahaataa ugu yaraan 12 sq. M. Noocyada dhaadheer waxaa lagu beeray hab waafaqsan nidaamka 6 x 5 m, oo leh meel quudin ah oo ah 25 sq. seedling leh nidaam xidid wanaagsan.
Waa muhiim! Ku darista digada cusub ee dalool beerto waxay dhaawici kartaa xididdada pear, waa wax aan suurtagal ahayn in laga hortago hordhaca.
Noocyada daryeelka ee noocyo ku'saabsan "Petrovskaya"
Peter's pear waa wax fudud in la beero iyo daryeel dheeraad ah, waraabinta, dabacsan, quudinta badan iyo waqti go'an iyo daaweynta cudurrada geedka aasaasida beerashada.
Sida qiyaasta ka hortagga ah iyo ilaalinta pear ee cayayaanka iyo cudurada, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo laanta geedka si loo hubiyo helitaanka ogsajiinta, ka saarida haraaga dhirta, dhulka dhulka ku dhow waa in si joogto ah loo furo, marka laamaha la ogaado iyo miraha la ogaado, si dhakhso ah ayey u jaraan oo gubaan.
Saameyn wanaagsan oo ku saabsan caabbinta pearka caabuqa ayaa ku buufin leh 1% Bordeaux dareeraha xilliga gu'ga hore iyo xilliga dayrta, iyo sidoo kale xakamaynta jirridda geed leh xal lime ah.
Waraabinta foliar ee isteroberi leh isku dar ah Ekoberin, Actofit iyo Baikal diyaarinta waxay saameyn ku leh difaacidda geedaha iyo ilaalinta cudurada fungal. Calypso waxay leedahay saameyn ka hortag ah cayayaanka, geedka ay daaweyntu ay u badantahay in ay saameeyaan cayayaanka kala duwan.
Cudurada ugu caamsan ee isteroberi waa:
qolof - waxay u muuqataa sida ubaxyada caleemaha caleemaha, caleenta saameeya hoos u dhacda, Nitrafen paste waxay caawisaa
fungus madow - muujiyay dhibco madow on caleemaha iyo miraha, ka takhalus isaga "Fitoverm"
miro miraha - waxaa lagu muujiyey dhibco kalluun ee hoyga brownish ah, dhirta kallana si fudud ayaa loo wareejiyaa hawada, ka takhalusi kallana adoo ku buufinaya qoryaha Bordeaux isku dar ah.
xayrta maqaarka - waxaa lagu muujiyey ubaxyada grayish ee dhammaan qaybaha dhulka pear, taas oo markaa isbeddelaysa dhibco madow, ka takhalusaan cudurka "Fundazole"
dalool - Cudurku wuxuu muujiyaa dhibco caleemo ah, kuwaas oo si aan caadi ahayn u eg miridhku, waxay ka takhalusi karaan isku dhafka Bordeaux.
Waraabinta seedling dhalinyaro ah waxaa la fuliyaa 7-10 maalmood oo kasta, waayo, hal geed waxay u baahan tahay 10 litir oo biyo diirran. Xilliga jiilaalka, xaddiga biyo-kordhintu korodho.
Waxaa muhiim ah in la hubiyo waraabinta ku filan inta lagu jiro bilowgii ubax iyo ilaa dhamaadka fruiting. Laga soo bilaabo bishii Agoosto, waraabinta waxaa la joojiyaa xilliga dayrta-qaboobaha oo idil.
Carrabka ku jira mashiinka geedka waa in la daboolaa si joogta ah, diirka engegtana waa in aan loo oggolaanin ka dib markaad waraabiyo geed. Waxaa muhiim ah in weedka geedaha, geedku waa inaysan ku jirin dhir kasta oo aan ka ahayn pears si looga fogaado la'aanta qoyaan iyo nafaqo.
Ma taqaanaa? Qoryaha koofiyadu waxay leeyihiin muuqaal cufan oo adag, ka dib markii lagu daaweeyo lebis geedeed, waxay u egtahay alwaax ebony.
Bacriminta iyo dharka sare ee dhirta
Xannibaadaha liita ee pear sii koraya waa in la bacrimiyey sanad walba, dhulalka bacrin ah u baahan yihiin bacrinta dheeraad ah mar 3-4 sano kasta. Laga soo bilaabo sanadka labaad ka dib markaad beerto, waxaad bilaabi kartaa inaad dalbato bacrimin at heerka of 8 kg ee humus, 20 g of potassium, 10 g oo ah HOL halkii 1 mitir oo labajibbaaran.
Bacriminta waxaa lagu dabaqaa guga ama dayrta si loogu diyaariyo godad hore. Hoolka quudinta ayaa waxaa ka buuxsamay dhulka isku dhafan Bacriminta macdanta, iyo bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu shubay sare si nafaqo leh oo wanaagsan oo geedo leh walxo waxtar leh.
Manjooyin khudradda ayaa lagama maarmaan u ah tayada dhirta iyada oo aan la adkaynin iyo laan aan midho dhalin. Markaad beertay laba sano jir, dhirta isla markiiba waa la gooyaa, oo ka tagta qiyaastii afar lakab oo iskeed ah oo koraya 45 ° xagal ah.
Lafaatiirta isbarbar-dhiga ayaa yaraaday rubuc heer ka sareeya dhulka si loo horumariyo horumarka fiican, halka dabbaal-bixiyuhu uu noqonayo 20 cm ka sareeya mustaqbalka, manjooyin isku mid ah oo la siman, dhirta oo sii kordhaya oo koraya ayaa la sameeyaa, sidaas awgeed qaabaynta taajka la rabay.
Waa suurad wacan in la hirgeliyo gooyo beerta beerta. Caleemaha tabarta yar, curkay iyo qalalan waa in laga saaraa. Gooyo waxaa lagu sameeyaa qadar aan ka badnayn rubuc ka mid ah tirada guud ee laamaha.
Goorta la goosanayo iyo sida loo xafidayo noocyada kala duwan ee pear goosashada "Petrovskaya"
Noocyo kala duwan oo loo yaqaan "Peter" ayaa soo gala bartamaha bisha bartamihii, laakiin waxay u badan tahay in laga yaabo in ay sabab u tahay xaaladaha cimilada. Jaale dhalaalaya oo miro ah ayaa kuu sheegi doona kudhaca jirkooda.
Isterobuur waxaa si fiican loo ilaaliyaa on geed oo aan ka badan-Bisaylkiisa, iyada oo aan u dhicin 14-20 maalmood. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si tartiib tartiib ah udheesho, si xushmad leh u doorato sida loo Dhadhan ma sii xumaanayso.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah hektar geedka canaska ah ayaa soo saari kara ilaa 30 tan oo miro ah
Midhaha pear "Petrovskaya" ayaa lagu duubay dhowr qaybood waxaana lagu kaydiyaa bacaha balaastikada ah iyagoo leh hawo qaboojiyaha hawo qaboojiyaha. Maqnaanshaha kaydka maqaarka waxaa lagu fuliyaa sanduuqyada aereed, kuwaas oo lagu rakibay on armaajo at height ah ugu yaraan nus mitir dhulka.
Waxaa suurtogal ah in lagu kaydiyo miraha khudradda ee weelasha leh furitaanka hawada si ay hawada u helaan, weelasha miraha waxaa lagu dhejiyaa weelkan kor ku xusan oo ay ka buuxsamaan balka ama jajabka xumbada.
Sida loo diyaariyo pear for jiilaalka
Kiimikada "Petrovskaya" waa mid aad u adag, laakiin waxay u fiicantahay in ay noqoto mid ammaan ah oo diyaarisa geed guga. Taas awgeed, wareegga xargaha ku dhow waxaa la mulched leh humus digada faras, iyo jir waxaa lagu duudduubay alaabta daboolka u ogolaanaya hawada in ay dhex maraan. Si loo ilaaliyo jilibka isteroberi ee waxyeellada ka soo gaarta jadeecada iyo jiirarka, isticmaalka shabeel ka soo jiirka ayaa lagu talinayaa.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka pear "Petrovskaya"
Cuntada Butros ayaa muddo dheer la ogaaday inay wanaagsantahay: Dufanka wanaagsan ee xagaaga ee xagaaga, kuwaas oo si ammaan ah loogu rakibay geedka oo aan ku dhicin goosashada ka hor, noocyada waa skoroploden, oo u adkaysata cudurada, laakiin waxaa jira sidoo kale faa'iido: goosashada waa qiyaastii laba toddobaad ee xilliga roobka miraha way ka yar yihiin dhadhanka, waxayna noqdaan biyo, dhajinta taajkii geedku wuxuu yareynayaa cabbirka miro. Faa'iidooyinka "Petrovskaya" pear, iyo sidoo kale muuqaalka miraha iyo tayada dhadhan, waxay siisay meel wanaagsan oo ka mid ah guryaha dalka iyo sirqo gaar ah, iyo daryeelka fudud ee geed, taas oo xitaa beerta aan khibrad lahayn lahaa door wanaagsan oo lagu dooranayo seedling for beeritaanka.